RGB LED Vagadziri & Vatengesi | China RGB akatungamira fekitori
Yakakwira-inopenya mhedzisiro ina mune imwe 5054 RGB Series
Chigadzirwa Tsananguro Iyo RGBW5054package ine ekukwirisa simba rekubuda, Yakakwira simba rekushandisa, yakafara kutarisa kona uye compact fomu chinhu. Aya maficha anogadzira paseti yakanaka ye LED yehurefu hwakawanda hwekushandisa kwemwenje. IWhite Mid Power LED inowanika muhuwandu hwekupisa kwemavara kubva ku2700K-650OK. Kukura: 5.0 × 5.4 mm Simba: 0.25W / 2.0W Makiyi Makuru ● RGB.W inogona kudzorwa yakazvimiririra ● Yakakwira-inopenya mhedzisiro, Yakanaka yakavhenganiswa mwenje inokonzeresa, yakakwira-kudzikama ● Yakasiyana ...
Yakakwira-inopenya mhedzisiro 2835 RGB imwechete color Series
Chigadzirwa Chigadzirwa Iyi 2835 LED Mwenje Sosi ndeye yakakwira mashandiro emagetsi anoshanda mudziyo unogona kubata yakakwira kudziya uye yakakwira kutyaira ikozvino. Iyo diki pasuru pepa uye kukwirira kwakasimba kunoita kuti ive yakanakira sarudzo ye LED pani mwenje, mwenje girobhuiti mwenje, LED tubu mwenje, backlighting uye nezvimwe. Zvimiro ● Inowanikwa muKutonhorera Chena, Kwakarerekera Chena uye Yakachena Warm chena ● ANSI-inoenderana chromatici ...
Yakakwira-inopenya mhedzisiro matatu mune imwe 5054 RGB Series
Chigadzirwa Chigadzirwa Iyo RGB 5054 package ine yakanyanya kushanda kusimba kuburitsa, yakaderera simba kunwa, yakafara kutarisa angle uye compact fomu chinhu. Aya maficha anoita kuti pasuru iyi ive yakakodzera LED yehurefu hwakawanda hwekushandisa kwemwenje. Kukura: 2.8 × 3.5mm / 5.0 × 5.0 mm Simba: 0.2W / 0.5W Makiyi Makuru ● Kukwirisa kwakanyanya uye kushanda kwakanyanya ● Inoenderana neyakagadziriswazve nzira yekunamatira encapsul ...